UQuibi uvumela ezinye iziqendu ezothusayo zisasaze kwiYouTube kuBabukeli beTV
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	UQuibi uvumela ezinye iziqendu ezothusayo zisasaze kwiYouTube kuBabukeli beTV
by UTimothy Rawles Aprili 30, 2020
by UTimothy Rawles Aprili 30, 2020 1,203 imbono
UQuibi ulungiselela ukuvala isithembiso sakhe simahla kwiinyanga ezintathu ixesha lokulingwa kwaye inika ababhalisi abanokubona umxholo wabo ngaphandle kokuba bakhuphele usetyenziso.
Ubhubhane we-coronavirus usenokuba uthintele kakhulu imodeli yeselfowuni uQuibi ebezama ukuphuma. Iqonga lomxholo wefom elifutshane linamagama amakhulu aseHollywood anegalelo kwiiprojekthi, kodwa ngabantu ababekwe ekhaya into ephathekayo yenkonzo isenokungafumani mdla ungako kubabhalisi.
Ukuqala kukhuphe iziqendu ze Awona Mdlalo uyingozi, I-Stranger kwaye dummy kwiphepha layo le-YouTube ebelisetyenziswa ikakhulu njengekhathalogu yeetray kunye netreyila.
Nangona iqonga libamba izihloko ezizii-episodic, banika ababukeli isahluko sokuqala kwaye bacele ukuba babhalise ukuze babone konke.
Abalandeli aboyikisayo banokufuna ukukhangela Umntu ongaziwayo, ifakiwe kumbono we-YouTube.
Nalu ukonakala kwesiqwenga:
“Umqhubi oselula othobekileyo nothobekileyo uphoswa kweyona mpazamo yakhe imbi xa umkhweli ongaqondakali waseHollywood Hills engena emotweni yakhe. Ukuhamba kwakhe ngendlela eyoyikisayo, emisa intliziyo kunye noThe Stranger kwenzeka ngaphezulu kweeyure ezili-12 ezimanyumnyezi njengoko ehamba ngenqanawa phantsi kweLos Angeles kumdlalo otyhafisayo wekati nempuku. ”
ngokunjalo Awona Mdlalo uyingozi unokuwukhulisa umdla wakho:
"Enqwenela ukukhathalela umfazi wakhe okhulelweyo ngaphambi kokuba abulawe sisifo esinganyangekiyo, uDodge Maynard wamkela isipho sokuthatha inxaxheba kumdlalo obulalayo apho kungekudala eza kufumanisa ukuba ayinguye umzingeli - kodwa lixhoba."